साइकल मन्त्रीको गाडी – News Portal of Global Nepali
सुरेश किरण ।
काठमाडौं । हिजै मात्र हो, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बाटोमा भेटेँ । नभेटेको पनि धेरै भइसकेको थियो । उहाँलाई अक्सर साइकल चढेर हिँडिरहेको देख्थेँ । तर, हिजो उहाँ गाडीमा सवार हुनुभएको रहेछ । अगाडि उहाँको गाडी, पछाडि परिवारको अर्को गाडी । दुईपांग्रे साइकलमा हिँड्ने मान्छेलाई अचानक दुइटा गाडीमा हिँडेको देखेपछि जो पनि छक्क परिहाल्छन् । म पनि परेँ ।
“ओहो मन्त्रीज्यू, आजचाहिँ गाडीमा ?” मैले सोधिहालेँ ।
“हो त, हें हें हें।” उहाँले संक्षिप्त उत्तर दिनुभयो, “समृद्धिको फल हो ।”
“समृद्धि ? कस्तो समृद्धि मन्त्रीज्यू ?” मैले कुरा बुझिनँ ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूले सधैँभरि समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि । त्यसैको? नतिजा हो यो । वास्तवमा समृद्धि भनेको के हो भन्ने देखाउन मैले यो गाडी लिएको हुँ ।”
“अब गाडीले कसरी बताउँछ त समृद्धिबारे ?” मैले पूरक प्रश्न राखेँ ।
मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, “हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीज्यू समृद्धिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ साइकल चढ्न थालेँ भने जनताले के भन्ला ? आफ्नै मन्त्रीलाई त एउटा गाडी दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले जनतालाई कहिले पो गाडी देला, भन्छ कि भन्दैन ? जनताले त्यस्तो भन्नै नपाओस् भनेर पनि मैले यो गाडी लिएको हुँ ।”
“किन हुँदैन ?” मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, “हिजोसम्म साइकल चढेर हिँड्ने मान्छे आज गाडीमा गुड्न थालेको छ । ल हेर, भनेर मलाई देखाएपछि त समृद्धि आएको पुष्टि नै भयो नि । भएन र रु म हिँडेँ, बाँकी कुरा पछि गरौँला ।” मन्त्रीज्यू खर्रर अगाडि बढ्नुभयो । म त्यहीँ बसेर उहाँको पुरानो साइकल सम्झिन थालेँ ।